Golaha Guurtida Somaliland oo maanta mudo laba sanadood ah loo kordhiyay – Kalfadhi
Golaha Guurtida Somaliland oo maanta mudo laba sanadood ah loo kordhiyay
Xildhibaanadda Golaha Guurtidda Somaliland oo uu shir-guddoominayay gudoomiyaha golahaasi Saleebaan Maxamed Aadan, ayaa maanta mudo laba sanadood ah ku kordhiyeen mudada uu sii jirayo golaha wakiillada.
Kulankii maanta waxaa soo xaadiray 71 mudane oo ka tirsan golaha, waxaana mudo kororsigaasi aad uga soo horjeestay qaar kamid ah xildhibaannada.
Muddo kordhinta ayaa waxa ay ka bilaamaysaa 12-ka bisha Janaayo ee sanadka soo addan ee 2020 waxa ayna ku eg tahay 12-ka isla bishaas ee sanadka 2022.
Golaha Guurtida ayaa dhinacooda waxa ay taas ka dhigan tahay in ay mudada ka dhammaan doonto bisha Janaayo ee 2023-ka.
Kordhinta ayaa sida laga akhriyay golaha hortiisa waxa lagu saleeyay, markii ay caadaatay in aan waqtiga ka harsan mudo xileedka golaha wakiillada aanay suurogal ahayn in doorasho dhacdo.
Xildhabaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan (Indho_indho) oo ka mid ah gudi hoosaadka arrimaha dibadda ee guurtida ayaa sheegay in ay mudo bil ahba ay hayeen warqad ka timid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi taas oo uu ku dalbanayay in ay waajibkooda ka gutaan, xilli la joogo dhamaadka golaha wakiillada.
Warar kale oo dheeraad ah halkan kala soco….
Golaha Aqalka sare oo anxiyay sharciga Golaha Mihnadlaayasha Caafimaadka Qaranka
Xisaab-xirka miisaaniyadda ee sanadka 2018 mala waafajiyay sharciga maamulka iyo maaliyada dalka?